Zimbabwe Military Chief Likely to Be Appointed Vice President - The Wire
Zimbabwe Military Chief Likely to Be Appointed Vice President
Constantino Chiwenga, the top military chief, is set to retire and is being seen as the top contender for the post, in what has been claimed as the consolidation of the army's power against the ex-President Robert Mugabe.
Army chief General Constantino Chiwenga arrives to attend the inauguration ceremony to swear in Zimbabwe's former vice president Emmerson Mnangagwa as president in Harare, Zimbabwe, November 24, 2017. Credit: Reuters/Mike Hutchings
Emelia Sithole Matarise
Commander of Zimbabwe Defence Forces General Constantino Chiwenga looks on after the swearing in of Emmerson Mnangagwa as Zimbabwe’s new president in Harare, Zimbabwe, November 24, 2017. Credit: Reuters/Siphiwe Sibeko
Harare: The head of Zimbabwe‘s military looks set to be appointed vice president as the government said on Monday he would retire pending “redeployment” in what is seen as a reward for leading a de facto coup last month that ended Robert Mugabe’s 37-year rule and brought Emmerson Mnangagwa to power.
Mnangagwa has appointed several senior military officers to his cabinet and the ruling party’s executive Politburo since he was sworn in as president on November 24. Army Commander Phillip Sibanda will succeed Chiwenga as defence forces chief, a government statement said.
Mnangagwa appointed Major General Edzai Chimonyo, Zimbabwe‘s ambassador to Tanzania, to succeed Sibanda as army commander and promoted a number of other senior army officers to major general.
The government also announced the retirement of police chief Augustine Chihuri, an unpopular Mugabe loyalist who it said has been on leave since December 15. Chihuri was accused by rights groups of presiding over crackdowns on dissent and popular protest in the 18 months before Mugabe was overthrown.
Zimbabwe‘s economy collapsed in the latter half of Mugabe’s rule, especially after violent farm seizures of thousands of white-owned commercial farms.
Civic groups have been urging the soldiers to leave the streets since Mnangagwa was sworn in to replace Mugabe as president of the southern African country on November 24.